Igbo, John: Lesson 009 - Izuzu nke Chineke pụtara ìhè n'ime mmụọ nke (Jọn 1:14-18) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 009 (The fullness of God in Christ)
3. Izuzu nke Chineke pụtara ìhè n'ime mmụọ nke (Jọn 1:14-18)
15 Jọn gbara àmà banyere ya. O we tie nkpu, si, Onye a bu Onye m'kwuru okwu bayere Ya, si, Onye ahu Nke nābia n'azum aghọwo Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri Onye mbu n'ebe m'nọ. 16 N'ihi na site na njuputa-Ya ka ayi onwe-ayi nile natara amara nime amara.
Baptizim kwuputara n'olu dara ụda na Kraist nke biara n'azu ya di n'iru ya, ya mere obu ihe kariri usoro ihe omumu. Site na ikwusa nke a, Onye Baptist ahụ kwuru na Kraist ebighi ebi. O gbaara eziokwu ahụ àmà na Ọ bụ n'elu ohere na oge na mbibi, chi na-enweghị ngwụcha na nke na-apụghị ire ure.N'ala ozara onye Baptist ahu wutere ya ka o hu idi ike nmehie nke madu. Ọ kụziiri ha banyere nchegharị maka mgbaghara mmehie. Ma mgbe Jisos huru Jisos, obi ya nwere obi uto, n'ihi na amuru Kraist dika madu ebighebi, juputara n'eziokwu, ka onwu ghara inwe ike n'aru ya. Ọṅụ nke ọdịdị na nke Krismas nwere isi iyi nke ndụ ebighị ebi nke Chineke n'ime ahụ mmadụ. Nke a malitere mmeri nke ndụ n'elu ọnwụ, n'ihi na n'ime ya ka e kpochapụrụ mmehie nke kpatara ọnwụ.N'ịghọta ịdị omimi nke amara a, Onye Baptist ahụ ṅụrịrị ọṅụ ma mee ka Chineke zuo okè nke dị n'ime Kraịst. Paul kwuputara, "nime Ya ka ndi Chineke na-ebi n'ime aru, ma i zuru oke n'ime ya." John hotara eziokwu ndia nime oke okwu ya, "site na njuputa ya ka ayi nata amara dika amara."
Kedu ihe bụ njupụta a nke Kraịst na gịnị ka anyị natara n'aka ya? Ọ bụrụ na ị cheta nkọwa Jọn banyere onye Kraịst na 14 amaokwu ndị gara aga, ị ga-ama ịdị ukwuu nke àgwà ya ma hụ otú oké osimiri nke amara ya si abịakwute anyị kwa ụbọchị:Kraist bu Okwu Chineke nke sitere na Nnam, dika okwu sitere n'onu madu. Ọ bụ obi obi Chineke na uche ya, ihe kachasị mma na obi ụtọ. Dika okwu nke ozioma ahu ruru ayi, abata uche ayi na igbanwe obi ayi, Kraist abia kwa nime obi ayi ma gbanwee ayi dika odi nma ya. Nke a ọ bụghị nnukwu amara?Kraịst bụ ndụ Chineke: Ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịmepụta ụlọ, afara na bọmbụ buru ibu, ma ọ dịghị onye nwere ike ịmepụta ndụ. E nyere ndị nne na nna ikike inyefe ụmụ ha ndụ nke Chineke nyere ha. Nke a ọ bụghị amara? Ebe ọ bụ na ndụ ụwa na-agabiga, Kraịst na-enye ndị kwere ekwe Mmụọ nke ya, onye bụ ndụ ebighị ebi. Ndị Kraịst niile na-eso ndụ Chineke, ọ gaghị anwụ anwụ ma ọlị. Nke a ọ bụghị amara?
Kraist bu Ìhè nke uwa. Ọ bụ onye mmeri n'ọchịchịrị na onye okike nke ìhè n'ọchịchịrị nke ọchịchịrị. Ọ na-enye olileanya maka ụwa na ọchịchịrị, na-enye ikike ka ụwa na-asụ ude n'adịghị ike. Ìhè nke Kraịst nwere ike iju mmiri nke ụwa anyị n'ìhè ya. Ọ na-enye eziokwu na ikwesị ntụkwasị obi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ ụlọ, na ezinụlọ na ụka, ọ bụrụ na ndị mmadụ kwere na ya. Nke a ọ bụghị amara na amara?Jizọs bụ Onye kere eluigwe na ụwa. N'ime ya bi na ike nke Chineke. Ọrụ ebube ya bụ ihe ịrịba ama na-egosi ikike ya. Nbilite n'onwu ya site na ndi nwuru anwu gosiputara ike nke ndu ya kari onwu. N'ime ahụ ya, o meriri ikike nke ike ndọda na ije ije na mmiri. O mebiri obere nri o nyere nye puku mmadu ise ruo mgbe afọ juru ha. Ọ makwaara ọnụ ọgụgụ ntutu isi gị. Kedu mgbe ị ga-akpọ isiala nye amara ya?
Ị ka na-achọ ịmatakwu banyere njupụta nke Kraịst? Ọ bụ Onye nwe ụwa. Ngwongwo nile na aku na uba, oge nile nke ndu gi na obuna gi onwe gi nwe ya. O mere gị na ọ bụ ya na-edebe gị. Kraist nwere ihe nile. O nyere gị uru ya n'aka gị ka ị na-elekọta ha maka ya. Ahụ gị, echiche gị na ndị mụrụ gị bụ onyinye nke Onyenwe gị nke o nyere gị. Kedu mgbe ị ga - ekele ya maka amara ya?Ihe dị ịtụnanya banyere banyere mmadụ na banyere Krismas bụ na njupụta nke Isi Chineke bụ anụ ahụ na nwa ọhụrụ. Akwukwo amuma a bu amuma buru amuma nke Aisaia n'afo 700 tutu o sitere na Mo Nso puta, si, "ayi amuru nwa, ayi ka enyere nwa nwoke, ochichi gabu kwa ubu ya. , Onye nduzi, Chineke di ike, Nna ebigh-ebi, Onyeisi Udo "(Aisaia 9:6). N'ụzọ dị mwute, uche ndị mmadụ na-adị ngwa ịghọta na Chineke n'ime Kraịst weghachiri mmadụ mmadụ oyiyi Ya dị ọcha nke mmadụ nwere n'oge mmalite. Jizos bu onye di ebube nke mara ihe, obu onye ndu nke na-achota ihe, Chineke di ike. Ihe nile na onyinye nke Chineke di n'ime nwa nke anumanu. Ị ghọtara amara dị ebube nke Chineke bịakwutere anyị n'ime Jizọs? Ugbu a anyị nwere ike ịsị: Chineke nọnyeere anyị!
Kraist achogh ichota omume ya nye onwe ya, ma oburu na oburu na odi na nelu igwe. O biara n'uwa, tinye n'ime anu aru ma mee ka oyiyi anyi di ala nyere anyi ohere inweta eluigwe, ka O weghachite anyi n'ebe Nna anyi no, wee mee ka anyi juo ya. N'otu aka ahụ,Pọl na-agba akaebe na nzube Chineke bụ ọnụnọ Ya zuru oke na Chọọchị. Gụọ Ndị Efesọs 1:23; 4:10 na Ndị Kọlọsi 2:10, mgbe ahụ, a ga-ekpuchi gị n'ime otuto na nduzi nke Chineke iji mee ka amara nke Onyenwe gị dị ukwuu. Anọla na-ata ahụhụ ná mmehie gị, kama meghee obi gị na njupụta Kraịst. Bịakwute nwatakịrị nke anụ ụlọ nri, ị ga-enweta ngọzi dị iche iche. Ọ ga-eme gị ka ị bụrụ amara maka ndị gbara gị gburugburu.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị bụ nwa Chineke. Ịhụnanya, ike na eziokwu nile dị n'ime gị. Anyị na-ehulata n'ihu gị ma na-aṅụrị ọṅụ, n'ihi na ị nọghị n'ebe dị anya ma anyị nọrọ n'etiti anyị. Ị hụrụ anyị n'anya. Ị ghọrọ mmadụ ma gbapụta anyị. Anyị na-ekele gị maka inye anyị obiọma na amara.
Gịnị ka Kraịst zubere?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)